Loharanon'ny renirano Mundo, tranga voajanahary mahavariana | Vaovao momba ny dia
Louis Martinez | | ecotourism, Fialan-tsasatra
Ny loharanon'ny renirano Mundo dia iray amin'ireo trangan-javatra voajanahary tsara tarehy indrindra ao amin'ny faritanin'i Albacete. Raha mijery azy ianao dia mety hieritreritra fa any amin'ny riandrano Hawaii. Na izany aza, ao amin'ny Tendrombohitra Alcaraz, iray amin'ireo mandrafitra ny Tendrombohitra prebetic.
Ny reniranon'i Mundo dia zakan'ny MAMPIDI-DOZA, izay ampiarahiny aorian'ny nahazoany, ny renirano loggerhead ary ny Vega de Riopar. Saingy aloha, mila fitsangantsanganana mamakivaky tanàna maro izy ireo, samy manana ny lazany sy ny tantara kokoa. Na izany aza, tsy hanantena mialoha izahay. Andao atomboka amin'ny loharanon'ny renirano Mundo.
1 Teraka ny reniranon'i Mundo, tranga tsy manam-paharoa
1.1 Rahoviana no handeha ary ahoana no ahatongavana any
1.2 Ny lalan'ny fitsangantsanganana amin'ny loharanon'ny renirano Mundo
2 Ny lalan'ny renirano Mundo
Teraka ny reniranon'i Mundo, tranga tsy manam-paharoa
Araka ny efa nolazainay, ny reniranon'i Mundo dia teraka eo amin'ny tandavan-tendrombohitra Alcaraz. Manokana, mivoaka avy any anaty lava-bato lalina be izy io. Fantatra avy amin'ity roa kilometatra telopolo ity izy ireo. Ary eo an-tampon'ny havoana karst mideza no misy ilay lavaka.
Ity kilasin'ny vatolampy ity dia manana toerana misy poria izay andalovan'ny rano. Araka izany, ny Mundo jet jet latsaka amin'ny endrika riandrano izy io rehefa mamorona lagoons. Avy amin'ireo dia mampivelatra ny fikorianany. Fahitana tsy manam-paharoa ny fahitana ny fivoahan'ny rano sy ny fidiny eo amin'ireo zavamaniry.
Rahoviana no handeha ary ahoana no ahatongavana any
Ny fotoana mety indrindra hahitanao ny loharanon'ny renirano Mundo amin'ny famirapiratany rehetra dia ny Primavera. Avy eo dia mivoaka miaraka amin'ny heriny mahavariana ny jet jet ao anaty trangan-javatra fantatra amin'ny anarana hoe "ny fipoahana."
Mba hahatongavana amin'ny toerana nahaterahan'ny renirano dia tsy maintsy mampiasa ny fiara ianao. Koa satria Riopar, tsy maintsy mandray ny làlana izay aleha ianao Raha ny. Enina kilometatra eo ho eo dia ho hitanao ny fiviliana mankany amin'ilay loharano. Hahatratra izany ianao rehefa mandeha roa kilometatra hafa. Aza manahy momba ny fijanonana fiara satria manana a fijanonana mahazaka fiara zato sy fiara fitateram-bahoaka enina. Saingy, aorian'ny nahitanao ny loharano, dia mbola betsaka ny zavatra azonao tsidihana eny amoron'ny ony Mundo.
Ny lalan'ny fitsangantsanganana amin'ny loharanon'ny renirano Mundo
Ny zavatra voalohany tadidinay dia ny hanaovanao io zotra fitsangantsanganana mahafinaritra io. Ampahany amin'ilay toerana nahaterahan'ilay renirano ary fito kilometatra ny halavany. Na izany aza tsy mora ny zotra satria mamakivaky ny haavony hatramin'ny XNUMX metatra ary manana mampidi-doza.
Na izany aza, raha manapa-kevitra ny hanao izany ianao dia ho gaga amin'ny tontolo atolotra anao. Raha ny marina dia mamakivaky ny Calares del Mundo sy La Sima Natural Park. Ho fanampin'izay, ny làlana dia mahatratra ny vavan'ny lava-bato izay ivoahan'ny reniranon'i Mundo. Mba hanaovana izany dia mila fahazoan-dàlana manokana ianao izay hahafahanao miditra ao aminy XNUMX metatra eo ho eo fa tsy mila fitaovana fanaovana «cave». Aza manandrana mandroso intsony anefa. Tsy mety afa-tsy amin'ny matihanina federasiona io.
Na izany na tsy izany dia mendrika izany ny zotra. Hahita toerana toa azy ianao Cala izao tontolo izao, lembalemba misy lavaka fantsakana be izay manivana ao anaty lava-bato ny rano. Aorian'izay, ity lavaka ity dia handroaka azy, ka hahatonga ny loharanon'ny renirano Mundo. Ho hitanao koa ny voromahery, voromahery ary karazana hafa ao amin'ilay faritra.
Ny lalan'ny renirano Mundo
Tsy ny loharanon'ny renirano Mundo ihany no tsara tarehy. Ilaina ihany koa ny manohy ny diany mandra-pahatapitry ny Segura. Mandalo ity fitsidihana ity tanàna tena tsara tarehy izay hiresaka aminao manaraka izahay.
Ity tanàna kely ity dia mitazona ny lova lehibe indrindra amin'ny faritra rehetra. Ao anatin'izany dia mamporisika anao izahay hitsidika ny taolan'ny trano mimanda Vanim-potoana Silamo sy ny fiangonan'ny fanahy masina, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, saingy tafaverina amin'ny laoniny tanteraka ary misy freskozy Gothic.
Fijerena an'i Riópar
Azonao jerena ao amin'ny Riópar the Tranombakoky ny Royal Factory of San Juan de Alcaraz. Izy io dia fijoroana ho vavolombelona velona momba ny ozinina varahina sy varahina nanorim-ponenana ny tanàna teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX ary noforonina tamin'ny alàlan'ny didin'ny mpanjaka. Charles III.
Any amin'ny tanànan'ny Molinicos, io toerana io dia fantatra amin'ny anarana hoe Ríomundo. Izy io dia miorina amin'ny tontolo iainana manana tombontsoa manokana, miaraka amin'ny kesika sy holatra marobe. Ho fanampin'izany, hahafinaritra anao tokoa ny mandehandeha amin'ireo làlambe mahazatra azy sy mahita ny fanasan-damba taloha.
Misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny distrikan'i Isso, tanàna kely iray izay eo amoron'ny reniranon'i Mundo. Ao anatin'izany dia azonao atao ny mitsidika ny fiangonan'i Santiago Apóstol, natsangana tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ary misy ny sarin'ny mpiaro an'i Isso, ary ny Tilikambo Almohad ny XIII izay misy trano mimanda ankehitriny nanjavona.
Fa ambonin'izany rehetra izany dia manoro hevitra anao izahay hahita ny mahasamihafa azy tetezana miampita ny ony. Noheverina ho Romana araka ny fomban-drazana izy ireo, na izany aza taty aoriana kely. Saingy, na izany na tsy izany, izy ireo dia ampahany amin'ny tontolon'ny hatsaran-tarehy lehibe.
Antsoina koa «The Serrana Jewel», ity tanàna ity dia toerana fivahinianana masina ho an'ireo tia horonantsary 'Masoandro, izay tsy zavatra kely', hatramin'ny ampahany voatifitra teny amin'ny arabe. Saingy misy toerana mahaliana hafa ihany koa, manomboka amin'ireo arabe ety sy miolakolaka.
Azonao atao ny mitsidika ny Fiangonan'ny paroasy, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao anatiny dia afaka mahita zavatra manaitra ihany koa ianao taova baroque an'ny XVII. Azonao atao ihany koa ny mandeha ambanin'ny Mora Arch, izay manana ny angano manokana momba ny famosaviana; tsidiho ny famokarana aqueduct sy hydraulic ary manakaiky kokoa ny Fomba fijery Híjar, izay manome anao fomba fijery mahavariana momba ny tendrombohitra Albacete.
Farany, holazainay aminao ny momba an'ity tanàna ity izay nisy ihany koa ilay sarimihetsika voalaza etsy ambony. Ho fanampin'izay, azonao jerena ao ny fiangonan'i Santiago Apóstol, izay tranokala mahaliana ara-kolontsaina ary misy ny trano fiangonana Espino tsara tarehy; ny Hermiteran'ny vadin'ny Betlehema, miaraka amin'ny alitara polychrome tsara tarehy, ary ny Convent sy Fiangonan'ny Karmelita Diso, natsangana tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX.
Ho famaranana, ny loharanon'ny renirano Mundo, in Castilla la Mancha, manolotra anao fizarana voajanahary amin'ny hatsarana tsara. Saingy ny manodidina azy dia mendrika ny fitsidihanao ihany koa noho ny lova lehibe nanan-karena sy ny lanja ara-tontolo iainana. Tsy te hahafantatra ny faritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Loharanon'ny renirano Mundo